ရထားလက်မှတ်ဖိုးများတွင်ငွေ Save လုပ်နည်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > ရထားလက်မှတ်ဖိုးများတွင်ငွေ Save လုပ်နည်း
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 11/12/2020)
တိုင်းပြည်နိုင်ငံကနေခရီးသွားလာ, သို့မဟုတ်မြို့မြို့မှ, ရထားကအမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံနှင့် Voyages ဤသို့ပြုဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်. ဥရောပရထား ပုံမှန်အတိုင်းအကြီးအကျယ်ခရီးထွက်အကွာအဝေးအပေါ်အခြေခံထားတယ်, သို့သော်, airfares နဲ့တူ - ပါ - ခဝယ်လိုအားပေါ် မူတည်. အတက်အကျနိုင်သည့်အတွက်များစွာဥရောပရထားလမ်းကုမ္ပဏီများမှယခုအခါပြောင်းလဲနေသောစျေးနှုန်းစနစ်ပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြ, ကန့်သတ်, သို့မဟုတ်သင်ဝယ်ယူဘယ်လိုအစောပိုင်း. သငျသညျသြစတြီးယားသွားရန်စီစဉ်ထားခြင်းရှိမရှိ, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံ, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, or Italy, သင့်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအနည်းငယ်သုတေသန ရထားခရီး တကယ်ကသင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုဆန့်ကိုကူညီနိုင်. ဒီမှာပါ ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များ အပေါ် ရထားကိုပုံမှန်အတိုင်းအပေါ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ကိုဘယ်လို သင့်ရဲ့ခရီးသွားမှတ်တမ်းစဉ်အတွင်း.
မရရှိနိုင်ခဲ့လျှင်, advance train tickets typically go on sale6ရှေ့ဆက်နယ်လှည့်အချိန်လအတွင်း. သို့သျောလညျး, ဘွတ်ကင်တောင်မှပဲရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲမတိုင်မီနေဆဲတတျနိုငျသ သင်တို့ကိုကယ်တင် ပိုက်ဆံတစ်လုံလောက်သောငွေပမာဏကို, ဒါကြောင့်ဘယ်အချိန်မဆိုမဖြုန်းတီးပါနဲ့!
သငျသညျသွားလာချင်သည့်အခါနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ခြင်းမကြာခဏကြီးမြတ်ငွေစုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်. ရထားလက်မှတ်ဈေးမြင့်ဆုံးကာလအတွင်းမြင့်တက် အားလပ်ရက်ရာသီ တချို့ဥရောပတိုင်းပြည်များတွင်. ဒါကန်းကျင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် နွေရာသီ လများ, အထူးသဖြင့်ဇူလိုင်လနှင့်သြဂုတ်လအတွင်းက.
သင်တို့သည်ဤလအတွင်းပြင်ပသွားလာရန် option ရှိပါက, the tickets can be much cheaper to purchase. လည်း, holiday times such as ခရစ္စမတ် နှင့် အီစတာပှဲတျော, are peak times – check when ကျောင်းကအားလပ်ရက် အပေါ်ဖြစ်ကြပြီးထိုအကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစား.
သင့်ရဲ့လက်မှတ် Rebook – ရထားကိုပုံမှန်အတိုင်းအပေါ်ပိုက်ဆံကယ်တင်
သငျသညျအစဉျအမွဲသာသင်၏ဝယ်ယူမှုကိုဖန်ဆင်းပြီးနောက်ခမကြာမီကျဆင်းသွားကြောင်းကြည့်ဖို့ရထားလက်မှတ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ဖူး? Train ticket prices tend to fluctuate – မကြာခဏထိုနေ့ရက်တွင်. ကုမ္ပဏီ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းမူဝါဒအပေါ်မူတည်ပြီး, သင်အတွင်းပြုမူလျှင်ပုံမှန်အားဖြင့်နိမ့်မှုနှုန်းမှာ cancel နိုင်နှင့် re-စာအုပ်ဆိုင်ကသင်၏ရထားဖြစ်သင့် 24 သင်၏မူရင်းဝယ်ယူနာရီ.
ဘော်ဒိုး Biarritz မှရထား
ပဲရစ် Biarritz ရထားမှ
တချို့ကမီးရထားကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ဖျက်သိမ်းခြင်းအချိန်ကာလနှင့်အတူအခြားသူများထက်ပိုမိုပျော့ပျောင်းနေကြသည်. အချို့ကိစ္စများတွင်, သငျသညျ 24 နာရီပြတင်းပေါက်၏အပြင်ဘက်သင့်ရဲ့လက်မှတ်ကိုပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်. ဒါဟာအခြားလက်မှတ်ဝယ်ယူမတိုင်မီ၎င်း၏မူဝါဒများအပေါ်တက်ကိုဖတ်မှသင့်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရဲ့ website ကထွက်စစျဆေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်. တစ်နိမ့်မှုနှုန်းမှာသင့်ရဲ့လက်မှတ် rebooking အားဖြင့်အသစ်သောရထားစျေးနှုန်းများတစ်မြျှောစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့သေချာပါစေ.
အထူးလျှော့စျေး၏အားသာချက်ကိုယူ – ရထားကိုပုံမှန်အတိုင်းအပေါ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
အချို့သော ဥရောပရထားလမ်းကြောင်းများ သားသမီးတို့အဘို့သိသိသာသာဈေးလျှော့ပူဇော်, ကျောင်းသားများအတွက်, နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများခရီးသွားများအတွက်. သုံးကျိပ်တပါးမှအသက်ထံမှကလေးများယေဘုယျအားဖြင့်ပယ်ကောင်းတစ်ရာခိုင်နှုန်းအရ, ၏နှစ်အောက်ကလေးများအနေဖြင့်3typically travel free. Students and senior discounts may be available depending on the trains and destination you are traveling to. သင်တစ်ဦးလျှော့လက်မှတ်ဝယ်ယူလျှင်ခပ်သိမ်းသောကာလသင်သည်ပေါ်တွင်သင်၏ကျောင်းသားသို့မဟုတ်အကြီးတန်းကဒ်ရှိသည်ဖို့အရေးကြီးသောကြောင့်.
ကွဲပြားခြားနားသောဥရောပရထားလမ်းကွန်ရက်များတစ်လျှောက်လုံးရရှိနိုင်ပါသည်လျှော့ပုံမှန်အတိုင်းများများရှိပါတယ်. အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ပါတို့ကနောက်ဆုံးပေါ်အထူးလျှော့စျေးများအတွက်မြျှောစောင့်ရှောက်ဖို့သေချာပါစေ Facebook က နှင့် တွစ်တာ စာမကျြနှာ.
သင်အကြိုက်ဆုံးဥရောပမြို့သို့ရထားကိုယူပြီးစဉ်းစား? ကိုသွားပါ ကြှနျုပျတို့၏ website saveatrain.com အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းထုတ်စစ်ဆေးနှင့်သင်၏နောက်စွန့်စားမှုစီစဉ်စတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-save-money-on-train-fares%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / ကသို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / es ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
မင်းချစ်သူ ရထားခရီးသွား Travelingtips traveltips